निर्भिक टक्सका दिमाग खियाउँने प्रश्नहरु भाग १० - के तपाई जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ? - ज्ञानविज्ञान
तपाईको रमाइलो तथा दिमागी कसरतका लागि यहाँ हामीले दिमाग खियाउँने प्रश्नहरुको भिडियो लिएर आएका छौँ । यो निर्भिक टल्क्स च्यानलमा भएको दिमाग खियाउँने प्रश्नहरुको भाग १० हो ।
आमालाई झुन्ड्याएर छोडी अनि छोरी चैँ नाँच्दै हिडी, के हो ?
यदि तपाईले यो प्रश्नको जवाफका बारेमा हतार गर्नु भयो भने तपाईले यसको जवाफ कुनै घटना होला भन्ने मात्रै सोच्नु हुनेछ तर यसको जवाफ त्यति सजिलो छैन । तपाईले दिमागमा जोड लगाएर प्रश्नले देखाउँने दिशा भन्दा अर्कै दिशा तर्फ सोच्नु पर्ने हुन्छ । अंग्रेजीमा आउट अफ द बक्स सोच्ने कुरालाई यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
Don't Miss it जान्नुहाेस् यस्ताे खानेकुरा शरिरकाे लागी हानिकारक छ ? जसले मृत्युकाे मुखमा पुर्याउन सक्छ
Up Next मानसिक तनावबाट मुक्त रहनका लागी अपनाउनुहाेस् यी तरीकाहरू